Mmekọahụ Mmekọahụ - ysmụaka --hụnanya - Bl - Bl Manga - Bl Webtoon - Yaoi - Yaoi Manga - Yaoi Hentai
Mmekọahụ Mmekọahụ nkezi 4 / 5 si 21
NA / A, o nwere ihe nlere 139.6K
Bae Woong bụbu onye egwuregwu siri ike ma dịkwa mma - ma ọ dịkarịa ala n'uche ya. N'ịchọ ịlaghachi n'anụ ahụ ya, ọ na-achọ mgbatị ahụ na agbata obi. Ọ na-akpọ ụkwụ na nke ahụ dị oke egwu na nke pụrụ iche. Enweghi ike ịnụ banyere mmemme ndị a kapịrị ọnụ ha na-enye ruo mgbe ọ bịanyere aka na nkwekọrịta enweghị nkwekọrịta. Ọ hụrụ ya dị ka ihe iju anya, mana ụmụ nwanyị na-arụ ọrụ ebe ahụ mara mma nke ukwuu na Woong enweghị ihe funahụrụ ya. Mgbe ọ bịanyere aka na nkwekọrịta ahụ, ọ na-amụta ihe nzuzo na ahụ ha: mmekọahụ.
Chapter 80 April 1, 2022
Chapter 79 April 1, 2022
Chapter 77 April 1, 2022
Chapter 76 April 1, 2022
Chapter 75 April 1, 2022
Chapter 74 April 1, 2022
Chapter 73 April 1, 2022
Chapter 69 December 17, 2021
Chapter 68 December 17, 2021
Chapter 67 December 17, 2021
Chapter 66 December 17, 2021
Chapter 65 December 17, 2021
Chapter 64 December 17, 2021
Chapter 63 December 17, 2021
Chapter 60 December 17, 2021
Chapter 59 December 17, 2021
Chapter 10 Nwere ike 12, 2021
Chapter 9 Nwere ike 12, 2021
Chapter 8 Nwere ike 12, 2021
Chapter 7 Nwere ike 12, 2021
Chapter 6 Nwere ike 12, 2021
Chapter 5 Nwere ike 12, 2021
Chapter 4 Nwere ike 12, 2021
Chapter 3 Nwere ike 12, 2021
Chapter 2 Nwere ike 12, 2021
Chapter 1 Nwere ike 12, 2021
Mgbịrịgba (Mikoto Asou)
Yoru Enweghị Tenohira
Epic nke Gilgamesh